Ufuna ukusiza unina odabule o-A abangu-7 | Isolezwe
Ufuna ukusiza unina odabule o-A abangu-7
Isolezwe / 3 January 2013, 11:00am / MHLENGI SHANGASE
Matric - UNKK Busisiwe Bhengu ehalalisela indodakazi yakhe u- Anele ebifunda e Zwelibanzi High eMlazi edabule o-A abayisikhombisa okubalwa nezifundo i Maths neSayensi. U-Anele ohlala emjondolo eMlazi ufuna ukuyokwenza iziqu zobudokotela eNyuvesi yaseKapa kodwa amandla akanawo
UKUKHULISWA ngunina othunga adayise kumfake ugqozi lokuthi adabule ngamalengiso umfundi wasemijondolo yakwa-C eMlazi, othole o-A abayisikhombisa.
U-Anele Bhengu (18) obefunda eZwelibanzi High, uthole o-A esiZulwini, Maths, Life Orientation, Accounting, Geography, Life Sciences nePhysical Science.
U-Anele ufuna ukuyokwenza iziqu zobudokotela eNyuvesi yaseKapa kodwa akakawutholi umfundaze ozomqhuba.
“Besisebenza kanzima sifunda nangezimpelasonto okungenye yezinto eyenze ukuthi ngiphumelele kahle. Yize benginabo abangani kodwa bengichitha isikhathi esiningi ngifunda,” kusho u-Anele.
U-Anele ongumagcino kwabo ezinganeni ezine, uthe uyise washona kanti ufuna ukufukula ikhaya asize nonina ophila ngokudayisa.
“Ikhaya yilona elihamba phambili ngakho ukuba umama ubengekho bengingeke ngikwazi ukuphasa ngamalengiso. Ngizokwenza konke okusemandleni ukuthi ngimbonge esaphila umama ngakho konke angenzele khona,” usho kanje.
Unina, uNkk Busisiwe Bhengu, obeqhilika yinjabulo uthe u-Anele yingane ezithulelayo engahluphi egxila ezincwadini zayo kuphela.
Uthe uthishanhloko ubebiza imihlangano njalo ebachazela ukuthi kumele baziphathe kanjani izingane uma sezibhala.
“Size samakhela itafula abefundela kulona, ubengaphazanyiswa futhi ubesigqugquzela ukuthi simeseke ukuze enze kahle. Ukuphasa kwakhe ngale ndlela kungenza ngijabule unyaka ngiwuqale kamnandi,” kusho uNkk Bhengu.
Uthe ukuhlala emjondolo akuzange kumthene amandla noma azenyeze ngoba ubelokhu eqhubeka nokwenza kahle selokhu aqala ukufunda.
“Ngiyathanda ukuthi aqhubeke afeze iphupho lakhe lokuba wudokotela inkinga wukuthi amandla yiwona angekho. Uyazimisela yena ngiyazi ukuthi into uma eseyifuna uzoyithola, ungenza ngiziqhenye kakhulu ngaye,” kusho uNkk Bhengu.